Wasiir katirsan Xukuumada Soomaaliya oo dhaliilay Balan qaad uu sameeyay Madaxweyne Farmaajo!! | kowtharmedia.com
Home ARRIMAHA BULSHADA Wasiir katirsan Xukuumada Soomaaliya oo dhaliilay Balan qaad uu sameeyay Madaxweyne Farmaajo!!
Wasiir katirsan Xukuumada Soomaaliya oo dhaliilay Balan qaad uu sameeyay Madaxweyne Farmaajo!!
Feb 21, 2017ARRIMAHA BULSHADA, WARAR
Wasiiru-Dowlaha Madaxtooyada Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa aragti ahaan dhaliilay balan qaad uu sameeyay Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo oo ku aadanaa in qofkii soo sheegaya gaari qarxa la abaal marinayo.
“Mudane Madaxweyne joooji qofkii soo sheega qarax boqol kun ayaa siinaa ee dheh qofkii qarax soo sheega amaankiisa ayaa sugaynaa”
Previous PostMUUQAAL: Tahriibayaal Badda ku dhex Jira oo Si xun loo garaacayo (Daawo) Next PostDAAWO MUUQAAL GAABAN: SHIRQOOLKII UU DAJIYAY MALEZ ZENAWI EE KU AADAN SOOMAALIDA!!